Befotaka – Raikitra omaly ny tena fanafihana an-dry Remenabila - AO RAHA Gazety Malagasy Online	Ny gazety Ao RahaTahiry
Befotaka – Raikitra omaly ny tena fanafihana an-dry Remenabila
Tapa-kevitra. Omaly vao maraina no niala tao Esira ao Befotaka ireo andiana mpitandro ny filaminana hisambotra an’i Remenabila sy ny tariny. Nisedra olana sahady izy ireo noho ny antony tsy fahafahan’ilay helikoptera sy fiaramanidina madinika manampy tanteraka amin’ny fanafihana ny tanànan’Iabohazo sy Bekolintsa.
« Ao Tolagnaro no miainga ilay helikoptera sy ilay fiaramanidina madinika. Ny olana anefa dia tsy afaka mitondra miaramila na fitaovam-piadiana maro ilay helikoptera Alouette II. Raha tsorina dia tsy natao entina hanafika ilay izy. Ankoatra izay, dia tsy fantatra ihany koa izay tena fitaovam-piadiana hananan’ireo dahalo ka atahorana ihany ny manidina eo ambonin’ilay toerana misy azy ireo », hoy ny loharanom-baovao avy amin’ny mpitandro ny filaminana any an-toerana.
Miezaka mandeha an-tongotra araka izany ireo mpitandro ny filaminana mifehy ny toerana izay misy ireo dahalo.
« Sarotra ny zava-misy aty noho ilay toerana tena any anaty ala ary ifandimbiasana lemaka sy toerana avo. Dia an-tongotra roa andro vao tonga any Iabohazo sy Bekolintsa. Manana olana eo amin’ny fifandraisan-davitra ihany koa izahay aty. Misy ny ezaka hikarohana vahaolana amin’ny alalan’ny fifandraisana amin’ny satelita. Mampiasa Radio Vhf ihany izahay, saingy tapatapaka ilay izy, arakaraka ny toerana », hoy ihany ny loharanom-baovao.
Nitondrana « mortier »
Mpitandro ny filaminana roa kamiao indray no niainga teny amin’ny Toby Ratsimandrava omaly nihazo an’Iabohazo. Nitondra fitaovam-piadiana mahery vaika toy ny « mortier » izay ahafahana mitifi-davitra hatrany amin’ny kilaometra maromaro. Misy amin’ireo zandary ihany koa no manam-pahaizana amin’ny informatika nalefa any an-toerana. Hampita ny zava-misy mandritra ny fanafihana no anton’izany, araka ny fantatra. Jeneraly roa no mibaiko ireo mpampandry tany any an-toerana dia ny jeneraly Rasolofonjatovo Julson Frank Iavizara, tompon’andraikitry ny fiarovana eo anivon’ny minisiteran’ny Foloalindahy sy ny jeneraly Manankay Augustin, lefitra voalohany ny kaomandin’ny Zandarimariam-pirenena.
Befotaka, zandary, Mpanoratra Rijakely, 21.06.2012, 08:08	FIARAHAMONINA